Sida loo Beddelaan AVI in wmv fudud oo dhakhso ah (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in wmv fudud oo dhakhso ah (Windows 10 ka mid ah)
Maxaad samayn kartaa haddii aad leedahay aad u badan videos AVI aad kombuutarka in aad jeclaan doonaa si ay u badalo u waafaqsan yahay ugu badnaan la barnaamijyada Windows-ku-saleysan ama software? Waxaa ugu fiican in aad iyaga loogu badalo in ay qaab file wmv ah, kaas oo la natively oo ay taageerayaan nidaamka Windows ka hawlgala. Waxaad ka heli doontaa tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida loo badalo aad files AVI in qaab file wmv kaliya qasabno yar midig ka badan halkan.
Qeybta 1: Best AVI in Wmv Video Converter
Qeybta 2: AVI Free in wmv Converter
Qeybta 3: AVI Online in wmv Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u AVI iyo wmv
Qeybta 1: Best AVI in Wmv Video Converter for Windows / Mac (Windows 10 ka mid ah)
Loo maqli siman on Media Windows ka Player.
Waafaqsan Assured u sixiddiisa on software wax Windows-ku-saleysan.
Beddelaan in kale qaabab video caan ah sida MP4, FLV, MOV iyo iwm
Sida loo badalo AVI ah in wmv
Download iyo rakibi version maxkamadda rogtid oo aad PC. Ka dib markii in, double-riix si aad u abuurtaan Converter video ah. Converter video waxay bixisaa aalladda-degdeg ah xawaaraha diinta iyo taageero qaab ballaaran, kuwaasoo ah idinka badalo karaa in qaabab file kale oo aad rabto.
1. Ku dar files AVI gal Converter ah
Riix Add Files button iyo geliyaan videos AVI aad jeclaan doonaa si loogu badalo la Converter ah. Dhab ahaan waxaad ka soo dhoofsadaan karaa dhowr files AVI waqti isku mid ah, maxaa yeelay waxa uu ku qalabaysan falanqeeyo Dufcaddii. Si aad badbaadin doonta waqti aan wax kale ku saabsan liiska loo qabto.
2. tafatirka file Optional
Waxa intaa dheer in Dufcaddii processing tayo sameecadda ah ee diinta, kaliya aad u baahan tahay in aad guji Edit in astaysto aad videos si kastaba ha ahaatee aad rabtid in aad. Isbedelada noqon kartaa Falanqeynta-waqtiga dhabta ah iyo waxa suuragal ah in ay dib oo dhan ka shaqeeyaan in ka badan mar kale.
3. Qaabka Settings
Soco in ay doortaan wmv sida qaab wax soo saarka ama doortaan Qaabka Output ku salaysan aad loo maqli karo doorashada (iebased doorashada qalabka la qaadi karo). Haddii aad doonayso inaad la qabsato goobaha qaabka, guji Settings in kaliya xaq kor ku xusan loogu badalo button.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo AVI in ay Wmv Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free AVI in wmv Converter
Kale badan abuuraya, Iyada oo gubanaya DVDs kuu gaar ah, waxaad si fudud u edit karaa oo aanay aad video files leh video ah Converter oo lacag la'aan ah. Waxa kale oo suuragal ah si ay u soo bixi videos goobta geeyo online.
Pro: Qiimaha = Waxba = Free!
1. Kaliya diinta ee qaabab file caadi ahaan loo isticmaalo.
2. Haddii aan xawaaraha diinta aalladda-degdeg ah.
3. No wax kaqabashada metadata u video files.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u AVI iyo wmv Qaabka
AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video Wmv waa qaab hooyo file introducted by Microsoft. Waxa ay si dabiici ah oo ay taageerayaan oo ka dhigtay kuwo la socon kara oo dhan ah ee Windows qalliinka ama habka ku salaysan, barnaamijka iyo software.